July 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 31, 2018 Puntland Mirror 0
Garacad-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah dhagax dhigay dekad cusub oo laga dhisi doono magaalo xeebeedka Garacad ee gobolka Mudug. Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabada dhagax dhiga ayaa […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah u duulay magaalo xeebeedka Garacad ee gobolka Mudug, sida saraakiil katirsan dowladda ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Madaxweynaha ayaa la filayaa in […]
New York-(Puntland Mirror) Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Isniintii ansixiyay in dib loo dhigo dhimista ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Qaraar uu ansixiyay goluhu ayaa lagu ogolaaday joogista ciidamada loo yaqaan […]
July 30, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Isimada gobolka Nugaal ayaa qado sharaf u sameeyay Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre maanta oo Isniin ah. Munaasabada qado sharafta ayaa ka dhacday xarunta dalxiiska Hido-Raac oo kutaala duleedka magaalada Garoowe. […]
Asmara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Eriteeriya Isaias Afwerki ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Asmara maanta oo Isniin ah. Heshiiska ayaa ka kooban afar qodob oo waaweyn: 1. Soomaaliya waxay ku […]
Asmara-(Puntland Mirror) Somalia President Mohamed Abdullahi Farmaajo and his Eritrean counterpart Isaias Afwerki have signed an agreement in Asmara on Monday. The agreement consists of four major points: 1. Somalia is endowed with a strategic location […]
July 29, 2018 Puntland Mirror 0
Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Axad ah safar ku yimid caasimada Puntland ee Garoowe. Waa safarkiisii ugu horeeyay Puntland tan iyo markii la doortay. Puntland iyo shacabkeeda ayaa si maamuus […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho ku yimid Puntland markii ugu horeysay tan iyo markii uu qabtay xafiiska bishii Maarso ee 2017-ka. Khayre ayaa kasoo degay caasimada Puntland ee Garoowe, […]
Garowe-(Puntland Mirror) Somali Prime Minister Hassan Ali Khaire has arrived in Puntland for first time since taking office in March 2017. Khaire landed in Puntland capital, Garowe, on Sunday, and was welcomed by Puntland President […]
Asmara-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha Soomaaliya iyo Eriteeriya ayaa isku afgartay Sabtidii in ay soo celiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ayna safaarado ka kala furtaan caasumadahooda. Go’aanka ayaa la gaaray kadib markii Sabtidii ay kulan ku yeesheen Asmara, Eriteeriya, […]